Antony 5 Mila miezaka mafy hahalala bebe kokoa an'Andriamanitra | HEVITRA VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Antony 5 Mila miezaka mafy hahalala bebe kokoa an'Andriamanitra ianao
Androany isika dia hiatrika antony 5 tokony hiezahanao hahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra. Ny fifandraisana mahazatra amin'Andriamanitra dia zavatra tsara indrindra mety hitranga amin'ny mpino. Ny votoatin'ny famoronana antsika dia ny fananana koinonia miaraka amin'Andriamanitra. Ilay nanao ny lanitra sy ny tany dia maniry endrika fifandraisana tsy misy sakana amin'ny olony. Tsy mahagaga raha hidina ao amin'ny saha Edena Andriamanitra amin'ny hatsiaka hariva mba hiresaka amin'i Adama. Ny karazana fifandraisana amin'Andriamanitra sy Adama dia tsy nisy mpanelanelana. Andriamanitra mihitsy no hidina ary hiresaka amin'i Adama. Izany no karazana fifandraisana tian'Andriamanitra hananana amin'ny mpino rehetra.
Na izany aza, rehefa misy ny ota, dia nihena izany fifandraisana izany ary Andriamanitra tamin'ny alàlan'ny fitiavany sy famindram-po tsy maintsy nitady fomba tsara kokoa hifandraisana amin'ny lehilahy. Izay nitarika ny fahatongavanny fanahy masina. Ireo apôstôly niara-niasa tamin'i Kristy dia nanana fidirana tsy azo lavina amin'i Kristy, tamin'ny lafiny sasany dia fantatr'izy ireo tsara Andriamanitra mihoatra ny olon-drehetra. Ny Apôstôly Paul nandritra ny androny, na dia tsy nihaona tamin'i Kristy aza izy dia nifanena tamin'i kristy ary efa naheno zavatra betsaka momba an'i Kristy izy. Hoy ny Apôstôly Paul ao amin'ny bokin'ny Filipiana 3:10 mba ho fantatro Izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonan'ny fijaliany, izay nampitovina tamin'ny fahafatesany. Ny fahalalana an'Andriamanitra dia tsy manam-petra, maneho ny tenany amin'ny olombelona Izy araka ny haavon'ny hetaheta sy hanoanana ao am-pon'ny olona.
Rehefa miezaka ny hahafantatra an’Andriamanitra bebe kokoa isika dia lasa miseho kokoa amintsika Izy ary lasa mahalala azy bebe kokoa isika. Ny fahalalana an'Andriamanitra bebe kokoa dia midika fa tsy ho irery na oviana na oviana ianao amin'ny fotoana ilana fanampiana. Raha tsy ampy io antony io hiezahanao hahalala bebe kokoa an Andriamanitra dia andao asongadino ireo antony dimy hafa:
Ho an'i Koinonia
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny antony lehibe tokony hiezahanao hahafantatra tsara an Andriamanitra dia ny fananganana fifandraisana maharitra miaraka Aminy. Miteniteny foana Andriamanitra, tiany hohenoina lalandava. Fa rehefa tsy misy fifandraisana tsy tapaka eo amin'ny olombelona sy Andriamanitra dia mety ho Andriamanitra indray mandeha ihany no miteny.
Ny fanahin 'Andriamanitra dia miteny mandrakariva. Te hiresaka amintsika mandrakariva izy. Ny fananana koinonia miaraka amin'Andriamanitra dia toy ny fijanonana mavitrika amin'ny andro tontolo. Fantatrao fa tsy ho diso anjara amin'ny fahafinaretana rehetra amin'ny Internet ianao. Na izany aza, rehefa miditra Internet fotsiny ianao indraindray, dia be dia be ny zavatra tsy ho fantatrao. Toy izany koa no fiasan'Andriamanitra, rehefa mifandray tsara amin'Andriamanitra ianao dia miresaka aminao foana izy.
Mahazo valiny haingana amin'ny vavaka isika
Satria Izy no Mpamorona
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe aiza ireo mpanafika any an-danitra rehefa nandao ny tranony ambony Andriamanitra mba hifampiresaka tamin'i Adama? Midika ve izany fa tsy nisy olona tany an-danitra niresaka tamin'Andriamanitra fa nanapa-kevitra ny hidina tety an-tany izy mba hihaona amin'i Adama? Ny antony namoronan'Andriamanitra ny olona dia ny fananany hanana koinonia amin'ny olombelona. Tsy mahagaga raha tsy nahomby tao amin'ny zaridainan'i Edena ny olombelona, ​​mbola tsy nijanona hatreo Andriamanitra. Nalefany ho faty teo amin'ny hazofijaliana ny zanany lahitokana mba hahafahana mitondra famonjena ho an'ny olombelona ary hahazo fitahiana ny olona amin'ny fanomezana ny fanahy masina.
Ny tadiavin'Andriamanitra dia ny fifandraisana mahazatra Aminy ary izany no antony tsy maintsy hiezahantsika hahafantatra azy bebe kokoa. Rehefa voatahy amin'ny fanomezana ny fanahy masina ianao anio, dia manomboka mitombo ao aminy. Angamba Andriamanitra afaka mitsidika anao indray mandeha isam-bolana, na izany aza, mihoatra ny izany no tadiavin'Andriamanitra. Tiany ny hitrakao amin'ny teboka fa hanana fidirana tsy azo lavina ho any aminao lalandava Izy. Andriamanitra dia mahatsiaro ny olombelona, ​​izany no mahatonga Izy manangana karazana fifandraisana amin'ny olona izay tsy ananany amin'ny zavatra hafa noforoniny.
Manampy antsika handresy ny ota izany
Arakaraka ny ahalalantsika tsara an Andriamanitra no mampatanjaka ny fanahin Andriamanitra ao anatintsika. Ary hoy ny soratra masina raha mitoetra ao aminao ny herin'ilay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty, dia hamelombelona ny vatanao mety maty izany. Ny vatantsika mety maty dia mila hainganana hanoherana ny ota sy ny tsy fahamarinana. Ny fanahin'Andriamanitra dia manampy antsika handresy ny ota.
Misy hatrany ny fifanolanana eo amin'ny nofo sy ny fanahy. Tsy mahagaga raha nitomany mafy ny fanampiana ny apôstôly Paul fa sarotra aminy ny manao ireo zavatra tiany hatao, kanefa manao zavatra am-pahatokiana ireo zavatra tsy tiany hatao. Na izany aza, rehefa mihalehibe ao amintsika ny fanahin 'Andriamanitra, dia ho resy ny ota satria hanome antsika hery handresena ny tandindon'ny nofo ny fanahy. Ny soratra masina dia milaza fa izay tarihin'ny fanahin'Andriamanitra dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra.
Misy ezaka be eo amin'ny fiezahana hahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa. Rehefa mivavaka isika dia mahazo valiny haingana kokoa amin'ny vavaka ataontsika. Ho lasa akaiky kokoa an Andriamanitra isika rehefa miezaka ny hahafantatra azy bebe kokoa. Andriamanitra dia maneho ny tenany amin'ny mizana mitovy amin'ny hetahetantsika sy ny hanoanana azy. Rehefa manakaiky kokoa an 'Andriamanitra isika, dia ho fantatra amin'ny fomba vavaka ny feontsika ary hahazo valiny haingana kokoa amin'ny fangatahantsika isika.
Mitombo ara-panahy isika
Tokony hiezaka ny hahazo diplaoma amin'ny kilasy Kristiana zazakely isika. Ny fiezahana hahafantatra an Andriamanitra tsara kokoa dia mametraka antsika aminny toerana tsara kokoa hitomboana ara-panahy. Ny herin'ny maizina izay fahavalontsika dia mihalehibe ary mihaodihaody isan'andro, tsy afaka mijanona elaela isika. Rehefa miezaka ny hahafantatra bebe kokoa an Andriamanitra isika dia manampy antsika hitombo ara-panahy.
Rehefa mitombo ara-panahy isika dia afaka manitsaka ny maizina sy ny asany. Raha manao izany isika dia lasa mpampihorohoro ny herin'ny maizina na aiza na aiza misy antsika. Ny Kristiana tsirairay dia tsy maintsy mitombo ara-panahy, raha tsy izany dia hohitsakin'ny herin'ny fahavalo izy ireo. Milaza ny soratra masina fa tsy miala sasatra ny fahavalonao, mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany izy. Tsy tokony avelantsika ho lanin'ny fahavalo isika, tsy maintsy mitombo isika ary ny fiezahantsika hahafantatra tsara an Andriamanitra dia manampy antsika hitombo ara-panahy.
Previous lahatsoratraAndinin-Baiboly 10 Tsy tokony hohadinoinao rehefa marary ianao
Next lahatsoratraAhoana ny fomba hidirana amin'ny fitarihan'Andriamanitra mihoatra ny natoraly
Vavaky ny fahagagana ho fanasitranana ny homamiadana
Vavaka ho fiarovana an'Andriamanitra amin'ny taona 2021